इन्सुलेटेड ज्याकेट, पफर ज्याकेट, हाइब्रिड ज्याकेट - सेन्काई
स्की ज्याकेट र हिउँ जैकेट
इन्सुलेटेड र डाउन ज्याकेट पार्का
स्वेटर फ्ली ज्याकेट
पफर ज्याकेट र भेस्ट
प्याडि Jac ज्याकेट
आउटडोर प्याडि Jac ज्याकेट
वाटरप्रूफ महिलाहरू प्याडिंग आउटडोर ज्याकेट 9220306
वर्णन: महिला hooded प्रिन्ट प्याडिंग आउटडोर जैकेट वाटरप्रूफ र windproof छ। कडा खोल र पूर्ण टेप गरिएको सीमको प्रतिरोध गर्नाले तपाईंलाई चुहावट र संतृप्तिबाट बचाउँछ। मोटाई 100% पोलिस्टर इन्सुलेटेड महिला प्याडिंग आउटडोर ज्याकेटले तपाईंलाई न्यानो राख्छ। समायोज्य हुड र समायोज्य कफहरूले हावालाई बाहिर राख्न र गन्धको मौसमलाई सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै वर्षा, बादल वा हिउँ दिन। २ हात पकेटहरू दैनिक जीवनका लागि उपयुक्त छन्। यो दैनिक पोशाकका लागि उपयुक्त छ, स्कीइ,, स्नोबोआ जस्तो ...
लेडीको आउटडोर वाटरप्रूफ ज्याकेट 20 २२०3१।
वर्णन: महिलाको आउटडोर वाटरप्रूफ ज्याकेट न्यानो र वायुप्रूफ छ। कडा खोल र पूर्ण टेप गरिएको सीमको प्रतिरोध गर्नाले तपाईंलाई चुहावट र संतृप्तिबाट बचाउँछ। मोटाई 100% पोलिस्टर इन्सुलेटेड महिला प्याडिंग आउटडोर ज्याकेटले तपाईंलाई न्यानो राख्छ। समायोज्य हुड र समायोज्य कफहरूले हावालाई बाहिर राख्न र गन्धको मौसमलाई सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न मद्दत गर्दछ, जस्तै वर्षा, बादल वा हिउँ दिन। २ हात पाकेट र १ छाती पकेट दैनिक जीवनको लागि उपयुक्त छ। यो स्कीइ,, स्नोब जस्तो दैनिक पोशाकका लागि उपयुक्त छ।
महिलाको स्वेटर ऊन ऊन संकर ज्याकेट १ 17 30 .०
महिलाको क्लासिक स्वेटर ऊन को जैकेट १००% पॉलिएस्टर ऊनबाट स्वेटर-बुनाई अनुहार र १००% नायलॉन, थोक-मुक्त आरामसँग बनेको छ। फ्लाट-सीम निर्माणले थोकलाई कम गर्दछ र चाफिंगलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। समायोजन हुडले बतासलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। हेदरमा आउँदैछ। स्टोन वा हेदर ओब्सिडियन, यी म्यूट टोनहरू कुनै पनि फ्यास्नेबल पेयरि withको साथ काम गर्दछ जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पोशाक दिनुहोस् वा आरामदायक रहनुहोस्, यो टुक्रा कुनै पनि परिस्थिति र वातावरणमा उत्तम छ। विशिष्टता ...
पुरुषको प्याडेड ज्याकेट सिमलेस जिपर पोक ...
यो पुरुषको प्याडेड ज्याकेट भनेको तपाईंलाई चिसो जाडोको लागि चाहिने कुरा हो। ठूलो इन्सुलेट क्षमता, नम अवस्थामा पनि। पानी-विकर्षक बाहिरी कपडाको साथ सुपर-न्यानो र हल्का माइक्रोफाइर प्याडि-- यो दैनिक पोशाकको लागि उपयुक्त छ। हुड र कफमा नरम लोचदार ब्यान्डको साथ तातो ज्याकेटले हावालाई बाहिर राख्छ। यो पुरुषको प्याडेड कोट डिजाईन गरीएको हो र आरामदायक फिट र इष्टतम कार्यक्षमता प्राप्त गर्न सिर्जना गरिएको हो, तपाईंलाई उत्कृष्ट आउटडोको मजा लिदै गर्दा तपाईंको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न अनुमति दिदै ...
महिला प्याडि outdoor आउटडोर ज्याकेट 21२१8383 44 वा ...
महिलाको आउटडोर प्याडेड ज्याकेटले तपाईंलाई न्यानो राख्छ। हिउँ जैकेटको लागि वाटरप्रूफ, विन्डप्रूफ र गर्मी सिम वर्षाबाट गीला रोक्न हो। समायोजन आँधी हुड र कडा ईलास्टिक रिब-बुनिएको कफहरू हावालाई बाहिर राख्न मद्दत गर्दछ। नयाँ डिजाइनले कोटलाई उच्च गुणवत्ता र राम्रो बनाउँदछ। यो बाहिरी गतिविधिहरूको लागि उपयुक्त छ। सुविधाहरू: १. कपडा: शेल कपडा: पेशेवर पानी विकर्षक लेपित, अस्तर कपडा: १००% पॉलिएस्टर / ऊन। २.वाटरप्रूफ र विंडप्रूफ: हाईटेक पॉलिएस्टर फेब्रिकले तपाईंको शरीर सुक्खा र न्यानो राख्छ ...
महिलाको वाटरप्रूफ ज्याकेट 20 २२०50०१-२-6
महिलाको वायुप्रूफ प्याडेड ज्याकेटले हावालाई बाहिर राख्छ। वाटरप्रूफ शेल ज्याकेटले तपाईंलाई वर्षा र हिउँबाट सुख्खा र आरामदायी बनाउँदछ। डोरी र समायोज्य कफको साथ ड्याकेेबल स्टर्म हुडले न्यानोपन थप्दछ। उच्च गुणले भरिएकोले तपाईंलाई न्यानो बनाउँदछ। यो इनडोर र आउटडोर क्रियाकलापहरूको लागि उपयुक्त छ। सुविधाहरू: १. कपडा: शेल कपडा: पेशेवर पानी विकर्षक लेपित, अस्तर कपडा: १००% पॉलिएस्टर / ऊन। २. वाटरप्रूफ: महिलाको जाडो ज्याकेट जलरोधक सास फेब्रिकबाट बनेको छ, र सबै zippers ...
महिलाको नक्कली फर कोट WARMY
महिलाको हुड फर कोट एकदम राम्रो गुणको फक्स फरबाट बनेको छ। फर जैकेट न्यानो राख्नुहोस् र तपाईंको कडा फिगर रहनुहोस् यस लक्जरी कोटको मौसमको सबैभन्दा खराब मौसममा पनि। यो वातावरण मैत्री र प्राकृतिक छ। हुड र लोचदार कफले हावालाई रोक्न सक्दछ। कोट लगाउन सजिलो लाग्ने डिजाइन हो। यो अनौपचारिक पनि छ र आधिकारिक रूपमा ड्रेसिंग द्वारा पनि देखिन्छ, यो अनुकूलनको विस्तृत श्रृंखलाको साथ एक वस्तु हो। तपाइँको मनपर्दो सर्टहरू, लेगिंगहरू, कालो स्ल्याकहरू, डेनिम जीन्स, आदिको साथ उत्तम मेल
महिलाको वाटरप्रूफ हिउँ जैकेट NL0039KI-F
महिलाको प्याडि sk स्की ज्याकेट वाटरप्रूफ र विन्डप्रूफ हो। पेशेवर पानी विकर्षक लेपित, फ्लफ अस्तर र टिकाऊ कपडा राम्रो गर्मी प्रतिधारण ग्यारेन्टी, यो वर्षा वा धुंधला मौसम लड्छ। हटाउन योग्य समायोज्य हुड मद्दतको लागि बाहिर हावालाई आरामदायी राख्न मद्दत गर्दछ। द्रुत-ड्राई सामग्रीको साथ आरामदायक फिट शैली। छापिएको लोगोले दायाँ छातीमा ब्रान्ड देखाउँदछ। यो डाउनहिल स्कीइ,, स्नोबोर्डि,, स्नोस्पोर्ट्स र अन्य जाडो आउटडोर खेलहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। विशिष्टता ...
हाम्रो विकासलाई उच्च तहमा लैजानुहोस्
हामीले यस बर्षको बीएससीआई कारखाना अडिट पूरा गरी पास गरेका छौं। हामी सबैलाई थाहा छ कि बीएससीआई प्रमाणीकरणले कारखानालाई फाइदा पुर्‍याउँछ: १. पाहुनाहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्। २. फरकका लागि एउटा प्रमाणिकरण ...
Cationic कपडा को उपयोग
१. क्यासनिक कपडामा धेरै राम्रो पानी अवशोषण हुन्छ र यसको डाई tank ट्या tank्की भिन्नता तुलनात्मक रूपमा सानो हुन्छ, त्यसैले यो विशेष गरी खेलको कपडाको लागि उपयुक्त छ, मुख्य रूपमा स्वेटशर्ट, पसीना,
पुनर्नवीनीकरण कपडा को लाभ
पर्यावरण संरक्षण र टेक्नोलोजीको प्रगतिप्रति जनताको चेतनाको बृद्धि संग, पुनर्चक्रित कपडाहरु हाम्रो जीवनमा प्रवेश गरेका छन्। हाम्रो कम्पनीले अब पुनर्चक्रित कपडा t प्रयोग गर्दैछ ...
स्कीइ Jac ज्याकेट, स्की ज्याकेट, इन्सुलेटेड स्की ज्याकेट, बच्चाहरू स्की ज्याकेट, S० दशक स्की ज्याकेट, छाला ज्याकेट,